Zimbabwe: Treason charges an attack on freedom of expression | Amnesty International Canada
Amnesty International today expressed shock that at least 45 Zimbabwean activists have been charged with treason and could face the death penalty following their arrest at a lecture on the protests in North Africa .
“These persistent abuses demonstrate the need for urgent reform of Zimbabwe ’s security sector to bring to an end a culture of impunity for human rights violations and partisan enforcement of the law.”
Last month ZANU-PF supporters carried out attacks against opposition supporters in Harare ’s suburb of Mbare, but to date, the police have not arrested anyone.
Mr Munyaradzi Gwisai is a former Movement for Democratic Change parliamentarian. He is now a law lecturer at the University of Zimbabwe and the coordinator of the Zimbabwean chapter of the International Socialist Organisation
The activists are being charged with treason under Section 20 of the Criminal (Codification and Reform) Act [Chapter 9:23] or alternatively “attempting to overthrow the government by unconstitutional means under Section 22(2)(a)(i) of the Criminal Law (Codification and Reform) Act.